Uzovuka ngeThe Queen obesenyamalele
U-UYANDA Mbuli onethemba lokuthi abantu bazoyithanda indawo ayilingisa kwiThe QueenIsithombe: TWITTER
NOKUBONGWA PHENYANE | October 30, 2019
NGEMUVA kweminyaka ewu-14 enyamalele ekulingiseni, u-Uyanda Mbuli, uzophinde abonakale elingisa indawo kasonhlalakahle emdlalweni iThe Queen kuMzansi Magic.
U-Uyanda (41) akazisoli ngokulalela amazwi awatshelwa yinkakha yomlingisi uJohn Kani, owamkhuthaza ukuthi abuyele entweni ayithandayo ngesikhathi behlangana endizeni eyayisuka eGhana iza eNingizimu Afrika.
“Ngangikhuluma naye ngomkhakha akuwona nanokuthi usimele phesheya kwezilwandle. Wangibuza ukuthi ngayekelani ukulingisa kube kunamathuba amaningi kangaka? Leyo ngxoxo yethu iyona eyenze ngabuya futhi ngijabule,” kusho u-Uyanda.
Uthe emuva kwenkulumo wabe esekhuluma noConnie Ferguson ukuze amxoxele ngephupho lakhe lokubuyela ekulingiseni.
Ngenhlanhla kwavela indawo u-Uyanda azobe eyilingisa.
“Ithuba lokulingisa indawo kaCynthia livele lafika njengoba bebefuna umuntu ongusonhlalakahle futhi uConnie wabona ukuthi akekho ongalingisa le ndawo ngaphandle kwami. Futhi ngakujabulela ukuyithatha,” kusho u-Uyanda.
U-Uyanda ujoyina abalingisi okukhona kubo uNay Maps olingisa indawo kaDingane, Zukiswa Matola noBrenda Mhlongo.
Eveza umbono wakhe ngomsindo oke wasuka muva nje ngokuxhashazwa kwabalingisi okwahlaselwa kuwo inkampani yakwaFerguson ngumlingisi womdlalo iGazi uVatiswa Ndara, * -Uyanda, uthe ngesikhathi eseyimenenja eSABC wafunda okukhulu ngokuthinta imali kwithelevishini.
“Nginolwazi olukhulu ngenxa yeminyaka engayisebenza kumsakazeli womphakathi. Ngakhiqiza uhlelo olwalukhuluma ngempilo yami i-Uyanda It’s On. Ngakho ngiyazi abaphathi bakhuluma ngemali abanayo ngaleso sikhathi nabazosebenza ngayo kulolo hlelo noma umdlalo. Okuyiqiniso wukuthi izinkampani ezikhiqiza izinhlelo nemidlalo yizona umxhunanisi phakathi kwesiteshi sethelevishini, abalingisi nabo bonke abantu abasuke besebenza lapho. Ngakho kuyaphoqa ukuthi basebenze ngemali abasuke benikwe yona yisiteshi,” kusho u-Uyanda.
Uthe akasho ukuthi abantu abangajabuli futhi bangawuvezi umbono wabo.
“Abantu ngeke bakuqonda ukuthi kungani iThe Queen isayinisa abantu izinkontileka ezimfushane kodwa benza lokhu ngenxa yokuthi bafuna ukukhombisa ngamathalente ahlukene kulo mdlalo ukuze basize abanye bakhule,” kuchaza u-Uyanda.
Uveze ukuthi ujabule ngenkontileka ayithole kwabakwaFerguson.
“Ngingakutshela ngingananazi ukuthi ngesikhathi benginika inkontileka, ngayibuka yangijabulisa, ngabona ukuthi ngiyisayine ngoba konke engangikudinga kwakukhona,” kusho u-Uyanda.
U-Uyanda uqale ukubonakala kulo mdlalo ngoLwesihlanu.
“Sengikubheke ngabomvu ukuzwa imibono yabantu ngalo mlingiswa. Ngiyathemba abantu bazomthanda uCynthia futhi bamamukele ngezandla ezimhlophe emakhaya abo.”